စွမ်းသမျှ ခြွေ ကျွမ်းသမျှ ကြွေ – Grab Love Story
( မောင်ခြိမ့် )
သတိလက်လွတ်ဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်နေရာ ပြည့်စုံအောင် ပေါင်ကြားမှ ခုံးထနေသော လီးကြီက ဒေါ်မိုးမိုးစံ ပေါင်ကြားထဲ အမြှောင်းလိုက် ဖိကပ်နေတော့၏။
” ပလွပ် … ပြွတ် ပြွတ် …… မ ဖြစ် သင့် တော့ဘူး … သားရယ် … အဟင့် ဟင့် “
နူတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေရာမှ ဒေါ်မိုးမိုးစံက လူချင်းခွာကာ နံရံအား ကျောကပ် ထားလိုက်သည်။သူမ အနေဖြင့် ပြည့်စုံအောင် လူပျိုဘဝတွင် စိတ်အလို လိုက်ခဲ့သောလည်း သမီးဖြစ်သူနှင့် လက်ထပ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဆင်ခြင်နေထိုင်ခဲ့ရ၏။
” ဘာလို့ … ဟန်ဆောင်နေတာလည်း … အန်တီမိုးရယ် … ဖူးလေး ကျောင်းသွားချိန် … အိပ်ခန်းထဲ သား လီးကို ခိုးပြီး လာလာ ကြည့်တာ … သားသိပါတယ်ဗျာ “
” အိုရ် …… အဟင့် ဟင့် ဟင့် … အဲ အဲ အဲဒါ …… အန်တီမိုး မနေနိုင်လို့ပါ …… သားရယ် … ဝန်ခံပါတယ် …… ဒါပေမယ့် …… အန်တီမိုးနဲ့ သားနဲ့က မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလေ … နော် … သားလေး အပြင်ထွက်ပါတော့ “
” မထွက်ဘူးဗျာ … ဖူးလေးလည်း အိပ်နေတုန်းပါ … အိပ်ယာမနိုးသေးဘူး “
ပြည့်စုံအောင်မှာ စကားပြောရင်း နံရံကျောမှီထားသော ဒေါ်မိုးမိုးစံ၏ ပေါင်ကြားရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ရေဆေးပြီးကာစ စောက်ဖုတ်အုံပေါ် မျက်နှာ အပ်လိုက်တော့သည်။
” ပြွတ် … အ …… ပလပ် ပလပ် …… အဟင့် ဟင့် …… မယက်ပါနဲ့ …… အဟင့် သား ရယ် “
ဒေါ်မိုးမိုးစံ တစ်ယောက် သူမစောက်ပတ်အား ဒူးထောက်ယက်နေသော ပြည့်စုံအောင် ခေါင်းအား တွန်းကာ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား စိထားလိုက်ပြန်၏။သို့သော် ပြည့်စုံအောင်၏ သန်မာသော လက်နှစ်ဖက်က ပေါက်တန်များအား ပြန်ဖြဲကာ စောက်ဖုတ်အား အမိအရ ယက်နေတော့သည်။ဒုတိအကြိမ်တွင် ဒေါ်မိုးမိုးစံ တစ်ယောက် ငြင်းဆန်သည့် အားများ လျော့နည်းလာသည်။မဖြစ်သင့်မှန်း သိလျက်နှင့် ရရှိလာသော ကာမစည်းစိမ်နောက် လိုက်ပါခဲ့မိ၏။ ပေါင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးနှစ်ဖက်အား အနည်းငယ်ကားရင်း စောက်ဖုတ်အား မသိမသာ ကော့ပေးထားမိသည်။
” ဟာ …… ကိုကို …… မာမီ …… ဒါ ဘယ် လို ဖြစ် ……အိုရ် …… အဟင့် ဟင့် “
” ဟင် … ဖူးလေး “
” သမီးလေး … အဟင့် ဟင့် “
လင်ဖြစ်သူပြည့်စုံအောင်မှာ ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် စောက်ဖုတ်အာ ယက်ပေးနေရာ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးမိုးစံမှ ကော့ပေးထားသည်ကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် အသားများ တဆက်ဆက်တုန်ကာ မျက်ရည်များ စီးကျလာတော့သည်။ပြည့်စုံအောင် ထရပ်စဉ် ဒေါ်မိုးမိုးစံမှာ တဘက်ယူကာ သူမ ကိုယ်လုံးအား ပတ်ထားလိုက်၏။ ပြည့်စုံအောင် ပုဆိုးပြန်ဝတ်ချိန် ဝတ်ရည်ဖူး တစ်ယောက် ရေချိုးခန်း အပေါက်ဝမှ ထွက်ပြေးကာ အိပ်ခန်းထဲ ကားသော့ ယူပြီး တရှိန်ထိုး မောင်းထွက်သွားတော့သည်။
ဒေါ်မိုးမိုးစံ တစ်ယောက် မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် ဖြစ်ကာ တနေကုန် ငိုနေသလို ပြည့်စုံအောင်မှာလည်း တမြို့လုံး အနှံ့လိုက်ရှာနေရ၏။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ညမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်လာပြီး ပြည့်စုံအောင်နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးစံအား စကားမပြောတော့ပေ။သူမ တစ်ယောက်ထဲ သီးသန့်နေကာ ၂ပတ်အကြာတွင် မနက်ပိုင်း အစားစားပြီး တဝေါဝေါ အမ်နေတော့သည်။ထိုင်အမ်နေရင်း ထရပ်ရာ မျက်စိရှေ့ မြင်သမျှ အရာအားလုံး ချာချာလည်ကာ လဲကျသွား၏။
” ဟဲ့ … သား ပြည့်စုံ … မြန်မြန်ပွေ့ပြီး … အိတ်ခန်းထဲ ခေါ်သွား … အန်တီမိုး အသိ ဆရာဝန် ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် “
ခဏအကြာ ဒေါ်မိုးမိုးစံ၏ အသိဆရာဝန် ရောက်ရှိလာကာ အဖြစ်အပျက်အား မေးပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကြည့်နေ၏။ဆေးတစ်လုံး ထိုးပြီး ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် သတိပြန်ရလာသည်။
” နိုးပြီလား သမီး … အန်ကယ်က ဒေါက်တာ ထွန်းကိုပါ “
” ဟုတ် … ဒေါက်တာ … သမီး ဘာဖြစ်တာလည်း ဟင် “
” သွေးနဲနဲ … တိုးတာပါ ကျန်တာ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ခု ဘယ်လို ခံစားရလည်း သမီး “
” ရင်ဘတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီး အန်ကယ် … အန်ချင်နေသေးတယ် “
” ခ်ခ် ခ်ခ် … အန်ကယ် စိတ်ထင် မင်္ဂလာပဲ … သမီးရေ … နက်ဖန် ဆီးသွားစစ်လိုက် … ခု သောက်ဆေး ပေးထားခဲ့မယ် … ဒီနေ့ အိပ်လိုက် စားလိုက်ပဲ လုပ်နေ “
” ရှင် … ဟို ဟို … အန်ကယ် ဆိုလိုတာ “
” ဟုတ်ပါတယ် သမီးရဲ့ … ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ လက္ခဏာပါ … ကွန်ဂရက် ကျူလေးရှင်းပါ … ကဲ … ဒေါ်မိုးမိုးစံ ရေ ခင်ဗျား မြေးချီဖို့ ပြင်ထားပေတော့ … ကျနော် ပြန်မယ် “
” နေပါဦး … ဒေါက်တာရယ် … အအေးလေး ဘာလေး သုံးဆောင်ပါဦး “
” အချိန် နဲနေလို့ပါဗျာ … ဆေးရုံ ဂျူတီ ဝင်ရဦးမယ် … ခွင့်ပြုပါဦး “
ဒေါက်တာ ထွန်းကို ပြန်သွားသည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူး ဆီမှ တောက်ခေါက်သံ ထွက်လာရာ ကုတင်ဘေး ထိုင်နေသော ပြည့်စုံအောင်နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးစံ တို့နှစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်များ ဆက်ကနဲ့ တုန်သွားတော့၏။
” တောက် … လူယုတ်မာ ကလေး … ငါ မွေးရတော့မှာပါလား … ဘုံးးး ဘုံးးး … အဟင့် ဟင့် “
အိပ်ယာပြင်အား တဘုံးဘုံး ထုကာ ရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေး ထွက်ပေါ်လာသည်။
” ဝုန်းးးး ဒုန်းးးးး …… ခလွမ် လွမ် …… “
” ဘာ … ဘာလို့လည်း … ဖူးလေးရယ် “
” ဒီဟင်းတွေ … အနံ့ မခံနိုင်ဘူး … နောက်တခါ လာမချနဲ့ … ပြီးတော့ ရှင့် မျက်နှာလည်း မမြင်ချင်ဘူး … ကျမနဲ့ … ဝေးဝေး နေပါ “
ပြည့်စုံအောင်မှာ ကိုယ့်အမှားနှင့်ကိုယ်မို့ ဟင်းပန်းကန် အကွဲများအား စုသိမ်းကာ ဝတ်ရည်ဖူး အနားမှ ထွက်လာခဲ့ရ၏။နောက်ရက် ဒေါ်မိုးမိုးစံမှာ ချက်ချင်း အိမ်ဖေါ်တစ်ယောက်ရှာကာ သမီးဖြစ်သူအတွက် စီစဉ်ပေးလိုက်ရတော့သည်။ပြည့်စုံအောင်တစ်ယောက် အိပ်ခန်းခွဲအိပ်ရသဖြင့် ညအိပ်ရာ ဝင်တိုင်း မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးအား သတိရနေပြန်၏။
ဝတ်ရည်ဖူး စိတ်ဆိုးပြေကာ ဗိုက်ထဲမှ ရင်သွေးလေးအား အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ရင်း မိသားစုဘဝလေး ထူထောင်ရန် စိတ်ကူးယဉ်နေမိသည်။နေ့တိုင်း စိတ်ကူးယဉ်နေသော မိသားစုကမ္ဘာလေး ဒေါက်တာမင်းသူ ရောက်ရှိလာချိန် မှေးမိန်ခဲ့ရတော့၏။ဒေါက်တာမင်းသူမှာ အသားဖြူဖြူ အရပ်မောင်းကောင်းကာ မျက်နှာက လူချော စာရင်းဝင်သည်။ဝတ်ရည်ဖူး၏ ကိုယ်ဝန်အပ်ထားသော ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေဖြင့် အိမ်သို့ အဝင်အထွက် များလာခဲ့၏။
တဖြည်းဖြည်း မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးနှင့် ဒေါက်တာမင်းသူတို့ ဆက်ဆံရေးမှာ လိုတာထက် ပိုလာသော်လည်း ပြည့်စုံအောင်မှာ ကိုယ့်အမှားနဲ့ကိုယ်မို့ မပြောသာပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေရသည်။ပြက်သနာ စဖြစ်ကတည်းက အခန်းအောင်း နေတတ်သော ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဒေါက်တာမင်းသူ ရောက်ရှိလာသည့် နောက်ပိုင်း အပြင်ထွက် လည်တတ်လာ၏။အပြင်ထွက်တိုင်း အလှပြင်ကာ ကျော့ကျော့မော့မော့ ထွက်ကာ ပြန်လာတိုင်း မျက်နှာလေးက နွမ်းလျ လာတတ်သည်။မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးမိုးစံကလည်း အမှားလုပ်ထားသူမို့ သမီးဖြစ်သူအား အလိုက်ထိုက်လေး ဆက်ဆံနေရ၏။
ရက်များ တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးလာရာ မနက်ပိုင်း မိုးတအားရွာပြီး မနက်စာ စားအပြီး မိုးတိတ်သွားချိန် ဒေါက်တာမင်းသူ ရောက်ရှိလာသည်။ဧည့်ခန်းထဲ ထိုင်နေသော ပြည့်စုံအောင်အား တချက်ကြည့်ကာ ဝတ်ရည်ဖူး အိပ်ခန်းထဲ တန်းဝင်သွားတော့၏။ဝတ်ရည်ဖူးကလည်း အကြောင်းကြီးငယ်ရှိ၍ ပြည့်စုံအောင် တံခါးခေါက်လျင် တဒုန်းဒုန်း တဒိုင်းဒိုင်းနှင့် တုံ့ပြန်တတ်ပြီး ဒေါက်တာမင်းသူ အသံကြားလျင် ချက်ချင်း အိပ်ခန်း တံခါး ဖွင့်ပေး တတ်သည်။ဒေါက်တာမင်းသူ ဝင်သွားသည်နှင့် ခဏအကြာ ပြည့်စုံအောင်မှာ ဧည့်ခန်းမှ ထလာပြီး ဝတ်ရည်ဖူး အိပ်ခန်းနား မယောင်မလည်နှင့် သွားရပ် လိုက်၏။
” ဧည့်ခန်းထဲ … ဖူးလေး ယောင်္ကျားရှိတယ်နော် … ဖြစ်ပါ့မလား “
” ဖြစ်ပါတယ် … ဆရာရယ် … စိတ်ပူမနေနဲ့ … သူမြင်သွားလည်း … ဖူးလေးက … ဂရုမစိုက်ပါဘူး “
အိပ်ခန်းထဲ ခပ်တိုးတိုးပြောနေပေမယ့် အခန်းတံခါးဝအပြင် ရောက်ရှိနေသော ပြည့်စုံအောင်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြားလိုက်ရသည်။အိပ်ခန်းတံခါးအား အသာလေး တွန်းဖွင့်ရာ အထဲမှ လော့ချထားသဖြင့် ဖွင်မရတော့ပေ။အရင်ရက်များတွင် အခန်းတံခါး ဟထားရာ ဒီနေ့ပိတ်ထားသဖြင့် မယားဖြစ်သူနှင့် ဒေါက်တာမင်းသူတို့ ဆက်ဆံရေးအား သိချင်စိတ် ပြင်းပြလာခဲ့သည်။အခန်းဝမှ ပြန်ခွာကာ အိမ်ပြင် ထွက်ခဲ့ပြီး အိမ်ပြင်ရောက်မှ နောက်ဖေးမှ ပြန်ပတ်ကာ ဝတ်ရည်ဖူး အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်နား ခြေသံလုံအောင်နင်းကာ တိုးကပ်လာ၏။
ပြတင်းပေါက် ထောင့်ကွေးလေးမှ အခန်းထဲ ချောင်းကြည့်ရာ မှန်ချပ်များ ကြားမှ အတွင်းဘက်အား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရသည်။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လက်တကိုင်း အင်္ကျီကိုယ်ကျပ်လေးနှင့် ညဝတ်ဂါဝန်အပါးလေး ဝတ်ကာ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှဲနေပြီး ဒေါက်တာမင်းသူမှာ အပေါ်ကုတ်အင်္ကျီချွတ်ကာ ကုတင်ခေါင်းရင်းဘက် ပစ်တင်ရင်း ကုတင်ဘေး မတ်တပ်ရပ်နေ၏။
” ကဲ … ဒါဆိုလည်း … လူနာ ကြည့်ပေးတော့မယ်နော် “
” ကြည့်လေ … ဆရာ “
ဒေါက်တာမင်းသူမှာ စကားပြောပြီး ဝတ်ရည်ဖူးခါးမှ ဂါဝန်လေးအား ဆွဲချွတ်ပစ်သည်။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဂါဝန်ချွတ်စဉ် သူမဖင်ကြီးအား ကြွပေးလိုက်၏။ဂါဝန်ကျွတ်သွားသည်နှင့် ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးလေးကြားမှ အမွှေးပါးပါးလေး ဖုံးအုပ်ထားသော စောက်ပတ်နီတာရဲလေး ပေါ်ထွက်လာသည်။ဒေါက်တာမင်းသူတစ်ယောက် ဝတ်ရည်ဖူး ပေါင်ကြားမှ စောက်ပတ်လေးအား ကြည့်ကာ မျက်လုံးများ အရောင်တောက်လာတော့၏။လက်တဖက်က မြှောက်တက်လာပြီး ဝတ်ရည်ဖူး ဒူးခေါင်း အတွင်းဘက်မှ ပေါင်ခြံလေးအား ပွတ်သပ်ကာ ပေါင်ဂွနားလေး အရောက် ရပ်တန့်လိုက်သည်။
” လက်တွေ ကားပေးဦး … ဖူးလေး “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဒေါက်တာမင်းသူ စကားအဆုံး လက်နှစ်ဖက် ကားထုတ်ကာ လက်မောင်းအား ခေါင်းဘက် ကွေးထားပစ်၏။ဒေါက်တာမင်းသူက ဝတ်ရည်ဖူး ချိုင်းကြားအား လျှာအပြားလိုက်ပင့် ယက်ရင်း ပေါင်ဂွနား ရပ်တန့်ထားသော လက်ချောင်းလေးများမှာ စောက်ပတ်နီတာရဲလေးပေါ် အုပ်ကိုင်လိုက်တော့သည်။
” အ … ရှီးးးးးးးးးးး …… အားးးး အားးးးး “
” ဘယ်လို ခံစားရလည်း … ပြောပါဦး “
” အင်းဟင်း …… ရှီးးးးးးးး ယားတယ် … ဆရာ “
” ဘယ်နေရာက … ယားတာလဲ … ပလပ် ပလပ် ပြွတ် “
” အားးးး …… အမေ့ …… ချိုင်းကြားရော … အောက်ကဟာရောပါ “
” အောက်က ဘယ်ဟာလဲ … ဒါကြီးလား “
” ကျွတ်ကျွတ် … အမလေးးးး …… ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ်တယ် ဆရာ … ဖူးလေး စောက်ပတ်ရော ယားနေတာပါ “
ဒေါက်တာမင်းသူမှာ ချိုင်းကြားယက်ရင်း စောက်ပတ်အက်ကွဲကြောင်းထဲ လက်ခလယ်ဖြင့် ဖိဆွဲကာ စောက်စိလေးအား ကော်လိုက်သဖြင့် ဝတ်ရည်ဖူး ဖင်ကြီး မြှောက်တက်လာ၏။
မယားဖြစ်သူနှင့် ဒေါက်တာမင်းသူတို့ စကားပြောရင်း ပြုမှုနေပုံကို ကြည့်ကာ ပြည့်စုံအောင်တစ်ယောက် အံအောမှင်သက်နေမိသည်။ ဒေါက်တာမင်းသူမှာ ဝတ်ရည်ဖူး ချိုင်းကြားအား ယက်ရင် စောက်ပတ်လေးအား ပွတ်ပေးနေသဖြင့် စိတ်ထဲ တခုခု ဆုံးရှုံးသွားသလို ခံစားလိုက်ရတော့၏။ပိုဆိုးသည်က မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ စောက်ဖုတ် အနိုက်ခံရင်း လက်တဖက်က ကုတင်ဘေး မတ်တပ်ရပ်နေသော ဒေါက်တာမင်းသူ ဘောင်းဘီကြားအား ပွတ်သပ်ကာ လီးစုပ်ချင်ကြောင်း ပြောနေသဖြင့် ဝမ်းနည်း သွားရသည်။
” ဆရာ … ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်လေ … ဖူးလေး လီးစုပ် ချင်လှပြီ “
” စုပ်ရမှာပါ … ဖူးလေးရဲ့ … ဆရာလည်း ဖူးလေး စောက်ပတ်လေး ယက်ချင်နေတာ “
” ဟင့်အင် … ခု ဇစ်ဖွင့်ပေးတော့ နော် “
ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် လီးစုပ်ရန် ကလေးမုန့်တောင်းသလို တောင်းနေသဖြင့် ဒေါက်တာမင်းသူမှာ စောက်ပတ်အုံလေး ပွတ်ချေပေးနေရင်း လွတ်နေသော လက်တဖက်ဖြင့် ဇစ်ဖွင့်ပေးလိုက်ရ၏။ဘောင်းဘီဇစ်ပွင့်သည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ သူမ လက်လေးတဖက်နှင့် လီးအား ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ဆွဲထုတ်ကာ ဆာလောင်မွတ်သိပ် ဟန်ဖြင့် ဒစ်ဖူးအား ဆွဲစုပ်တော့သည်။ဒေါက်တာမင်းသူမှာ အသားဖြူသူမို့ လီးအရည်ပြားတလျှောက် အကြောစိမ်းများ မြင်နေရ၏။ဝတ်ရည်ဖူး ပါးစပ်ထဲ ကားထွက်နေသော ဒစ်ဖူးမှာ နီရဲနေပြီး ဒစ်ဖူးနောက်နား လီးအရည်ပြားပေါ်မှ ဂေါ်လီကြီးက ဖုထွက်နေတော့သည်။
” ပြွတ် ပြွတ် … အ အားးးး … ကောင်းလိုက်တာ ဖူးလေးရယ် … ဟူးးးး ရှီးးးး “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဒစ်ဖူးအား ပါးစပ်ထဲ ငုံရင်း လီးထိပ်အပေါက်လေးအား လျှာဖျားဖြင့် ထိုးစွပစ်ရင်း ဒစ်ဖူးအောက်ဖက် မေးသိုင်းကြိုးလေးအား လျှာအပြားလိုက် ဘေးတိုက်ယက်ပေးရာ ဒေါက်တာမင်းသူတစ်ယောက် မအောင့်အီးနိုင်ပဲ အသံထွက် ညည်းလိုက်ရသည်။ဒေါက်တာမင်းသူ၏ လီးအရည်ပြား အပေါ်မှ ဂေါ်လီကြီးက ဝတ်ရည်ဖူး စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများအား ချိတ်ဆွဲကာ အထွဋ်အထိပ်သို အကြိမ်ကြိမ် ပို့ပေးထားခဲ့၏။
ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင်အား စိတ်နာက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ ကြိတ်စီစဉ်နေရာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဆက်သွယ်နှင့် ဒေါက်တာမင်းသူအား သိခဲ့ရသည်။နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန် မဖျက်တော့ပဲ ဒေါက်တာမင်းသူ၏ အပြုစု အယုယများအား အောက် တိုးဝင်မိတော့၏။ယောင်္ကျားဖြစ်သူအား ရွဲ့ချင်စိတ်ဖြင့် ဒေါက်တာမင်းသူအား အထူးကုဆေးခန်းတွင် အကြိမ်ကြိမ် အလိုးခံလိုက်သည်။ဒေါက်တာမင်းသူ လီးမှာ ပြည့်စုံအောင်လီးနှင့် မကွာသော်လည်း လီးထိပ်မှ ဂေါ်လီက ဝတ်ရည်ဖူးအား ခံစားမှု့ အသစ်များပေးကာ အထွဋ်အထိပ်သို့ ခဏတိုင်းပို့ပေးနိုင်၏။
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လင်ဖြစ်သူအား ရွဲ့ပြီး အလိုးခံရာမှ ဒေါက်တာမင်းသူ လီးအား နှစ်ချိုက်လာခဲ့သည်။ဒီနေ့မနက်လည်း မိုးတိတ်သည်နှင့် အိမ်မှာပင် အလိုးခံဖို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တော့သည်။
ကုတင်ပေါ် ကိုယ်တုံးလုံး အနေထားဖြင့် ခေါင်းလေးစောင်းကာ ဒေါက်တာမင်းသူ လီးအား မက်မက်မောမော စုပ်ပေးနေသော မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ မျက်လုံးလေး စင်းပြီး လက်တဖက်က လီးအရင်း အောက်ဖက်ရှိ လဥများအား ညှစ်ချေပေးနေပြန်၏။
” ရှီးးးးးးးးးး …… အ …… လိုးကြစို့နော် ဖူးလေး “
” လိုး လေ “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ကိုယ်လုံးအားလှည့်ရင်း ကုတင်စောင်းပေါ် ဖင်ကြီးတင်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက် မြောက်ထားလိုက်သည်။ဒေါက်တာမင်းသူမှာ ဝတ်ရည်ဖူး ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား ကုတင်ဘေး မတ်တပ်ရပ်လျက်အနေထားဖြင့် ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်သည်။ဒေါက်တာမင်းသူ လီးကြီးရှေ့ သူမစောက်ပတ်လေးမှာ ဖေါင်းကြွနေကာ အရည်ကြည်လေးများ စို့နေပြန်၏။ကုတင်းစောင်း အိကားနေသော ဖင်သားစိုင်နှစ်ခြမ်းအား လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ဖြဲကာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လီးမြုပ်ကာ ဖိလိုးလိုက်သည်။ တချက်ချင်း လိုးရင်း ဖင်ဝနား ရောက်နေသော လက်ခလယ် ထိပ်လေးဖြင့် ဖင်ပေါက်အား ထိုးစွပေးပြန်၏။
လီးကြီးပြန်ထွက်လာတိုင်း လီးထိပ်ရှိ ဂေါ်လီမှ စောင်ခေါင်း အတွင်းသားများအား ချိတ်ဆွဲလာရာ စောက်ရည်များပါ လျှံကျလာရသည်။လီးအား ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်နှင့် ဖင်ပေါက်ထဲ လက်ခလယ်ထိပ်အား လက်တဆစ်ခန့် ထိုးသွင်းပစ်၏။စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ လျှံထွက်လာရာ
ဖင်ကြားထဲမှ ဖြတ်၍ အာက်သို့ စီးကျသွားတော့သည်။ စီးကျလာသော စောက်ရည်များ လက်ခလယ်ဖြင့် ပင့်သုတ်ကာ ဖင်ဝထဲ ထိုးကလိပေးပြန်၏။
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ စောက်ပတ်အလိုးခံရင်း ဖင်ပေါက်လေး ကလိခံရသဖြင့် ကာမအရသာ ၂မျိုးအား တပြိုင်ထဲ ခံယူနေတော့သည်။စောက်ပတ်လေးထဲ ဝင်ထွက်နေသော ဂေါ်လီကြောင့် အီစိမ့်နေရာ ဖင်ပေါက်ထဲ လက်ချောင်းလေးက မွှေပေးနေသဖြင့် စိတ်ထဲ မယိုးမယွ ခံစားလာရ၏။ စောက်ပတ် အလိုးခံရင်း ဖင်ခံချင်သော စိတ်များတဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ဒေါက်တာမင်းသူမှာ လီးတဝက်ခန့် အပြင်ထုတ်စဉ်
ဝတ်ရညါဖူး ဖင်ပေါက်ထဲ ညာလက်ခလယ်အား အဆုံးထိ ဆတ်ကနဲသွင်းပစ်၏။လီးပြန်သွင်းချိန် လက်ခလယ်အား ထိပ်ပိုင်းလေး ချန်ကာ အပြင်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။
” အားဟား ……… ရှီးးးး ရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ ဆရာရယ် “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဖင်ခံဘူးသဖြင့် လက်ခလယ်လောက်နှင့် အာသာမပြေတော့ပေ။ဒေါက်တာမင်းသူ လီးကြီးအား ဖင်ထဲ လိုးပေးစေချင်သည့် စိတ်များ ထကြွလာရ၏။
လီးဝင်ဖူးပြီးသား ဖင်မို့ လက်ခလယ် အသွင်းအထုတ် လုပ်ရာတွင် လျှောကနဲ့ လျှောကနဲ့ ဝင်ဝင် သွားတော့သည်။အရှိန်ရလာသည်နှင့် စောက်ခေါင်းပေါက်နှင့် ဖင်ပေါက်အား တပြိုင်ထဲ လိုးပေးလိုက်ပြန်၏။ စောက်ပတ်အား လီးဖြင့်လိုးကာ ဖင်ပေါက်အား လက်ခလယ်ဖြင့် လိုးနေသဖြင့်
ဝတ်ရည်ဖူး တစ်ယောက် အသဲခိုက်အောင် ကောင်းနေရှာသည်။
” ဗျစ် …… အ …… ဘွတ် ဗြိဗြိ …… ရှီးးးး ကျွတ်ကျွတ် …… ကောင်း ကောင်း ကောင်းတယ် ဆရာရယ် … … ရှီးးး ရှီးးးးးး “
ဝတ်ရည်ဖူးတယောက် ကာမစိတ် ပြင်းထန်လာကာ သူမနို့အုံနှစ်ဖက်အား သူမလက်ဖြင့် ညှစ်ချေကာ တအီးအီး ညည်းနေရ၏။ထိုစဉ် ဒေါက်တာမင်းသူမှာ စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးအား ထုတ်ကာ ဖင်ပေါက်ထဲ ပြောင်းလိုးတော့သည်။ဝတ်ရည်ဖူး တစ်ယောက် ဖင်ထဲ လီးဝင်သည်နှင့် မျက်လုံးများ စင်းကျလာ၏။ ဖင်ခံရသည်အရသာက စောက်ပတ်အလိုးခံရသည်ထက် ပိုကောင်းနေသလို ခံစားမိနေသည်။ခေါင်းလေးမော့ကာ အိကနဲ့ အိကနဲ့ ရှိုက်ရင်း နူတ်ခမ်းလေးများ တဆက်ဆက် တုန်ခါလာတော့၏။
ဒေါက်တာမင်းသူကလည်း မျက်နှာအမူယာ ပြောင်းသွားသော ဝတ်ရည်ဖူး ခံစားမှု့ကို ကြည့်ရင်း စိတ်လှုပ်ရှား ဖင်ဝလေးအား တရစပ် ဆွဲလိုးပစ်သည်။
ဝတ်ရည်ဖူးတယောက် ဖင်သားစိုင်များ မလှုပ်ပဲ ခါးလေးနွဲ့ကာ ယိမ်းကာဖြင့် ဖင်အလိုးခံရင်း လီးအရသာ ယူနေလိုက်ပြန်သည်။ဖင်ထဲ လီးကြီး ဝင်ထွက်နေပေမယ့် စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲမှ စောက်ရည်များ အိုင်နေရ၏။
” လိုး လိုး ဆရာ …… ဆောင့် လိုး ပေး ပါ နော် …… အ အ …… ဟုတ်တယ် ဆောင့်ဆောင့် …… မညှာနဲ့ “
ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် ရမ္မက်စိတ် တောက်လောင်ကာ မရှက်မကြောက် ခပ်ပြင်းပြင်း လိုးပေးရန် တောင်းဆိုနေပြန်သည်။
” အားးးးးး ရှီးးးးးးးးးး …… အဟင့် ဟင့် …… လိုးပါ ဆရာရယ် …… ကောင်းလွန်းလို့ပါ ရှင် …… အမလေးးး အားးး အားးးး …… ထွက် ထွက် ထွက်တော့မယ် “
စကားသံ ဆုံးသည်နှင့် စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ ထောင်ပန်းရာ ဒေါက်တာမင်းသူ ချက်နား ပန်းမိတော့သည်။စောက်ရည်များ ချက်အောက် စီးကျနေရာ ဖင်ဝနားလေး အရောက် လီးအရည်ပြားနှင့် ထိကာ ဖင်ပေါက်ထဲ တဇွိဇွိ တဗွိ့ဗွိ့ဖြင့် လီးဝင်လီးထွက်သံများ ဆူညံနေ၏။ဒေါက်တာမင်းသူမှာလည်း ဝတ်ရည်ဖူး ပေါ်နှစ်ဖက်ထမ်းကာ ဆောင့်လိုးရင်း ဖင်ပေါက်ထဲ လရည်များ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။
” အားဟား … ဖူးလေးရယြ …… ရှီးးးးးးးးးးး အ အားးးးး အားးးးးး “
အံကြိတ်ပြောရင်း ခေါင်းတရမ်းရမ်းဖြင့် လရည်ပန်းထွက်နေသော လီးအား ဝတ်ရည်ဖူး ဖင်ပေါက်လေးထဲ အရင်းထိ ဖိကပ်ထားလိုက်၏။ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ နို့အုံအား သူမလက်နှစ်ဖက်နှင့် ညှစ်ချေရင်း လက်ကျန်စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ကာ ဖင်အတွင်းကြွက်သားများဖြင့် ဒေါက်တာမင်းသူ လီးကြီးအား ညှစ်ပေးနေသည်။
” တအားကောင်းတာပဲ … ဆရာရယ် နောက်တခါလည်း … ဖင်လိုးပေးရမယ် သိလား “
ဒေါက်တာမင်းသူ ပုခုံးပေါ်တင်ထားသော ခြေထောက်နှစ်ဖက်အား အားယူကာ ကော့ထိုးရင်းသုတ် ပါစပ်က တဖွဖွပြောနေတော့၏။
” အင်းပါ ဖူးလေးရယ် … ကိုယ်ဝန်နဲ့မို့ ထိန်းလိုးနေရတာ … ဖူးလေး ဖင်ကို လီးတဆုံးထည့်ပြီး ဆောင့်လိုးချင်တာ “
နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ် ဘေးချင်းယှဉ် မှေးကာ အနားယူ စကားပြောရင်း မှိန်းနေကြသည်။လူတွေကမှိန်းနေကြသော်လည်း ဒေါက်တာမင်းသူ လက်တဖက်မှ ဝတ်ရည်ဖူး စောင်ဖုတ်အား ပွတ်သပ်နေသလို ဝတ်ရည်ဖူးကလည်း ဖင်လိုးပေးထားသော လီးကြီးအား သူမ လက်တဖက်ဖြင့် ပွတ်သပ်နေ၏။အတော်ကြာမှ ဒေါက်တာမင်းသူကကုတင်ပေါ်မှ အောက်သို့ လိမ့်ဆင်းလိုက်သည်။ မာန်မကျသေးသော လီးမှာ ပေါင်ကြားထဲ ဆက်ကနဲ့ တုန်သွားပြန်၏။
” ပြန်တော့မယ်နော် … ဖူးလေး “
” နေဦးလေ …… ဆရာ …… ခြေကြွကလေး ပေးဦးမယ် … ခ်ခ် “
စကားပြောရင်း ခန္ဓာကိုယ်အား ဒေါက်တာမင်းသူ ပေါင်ကြားသို့ ဘေးတစ်စောင်းလှဲကာ လီးတစ်ချောင်းလုံး ပြောင်စင်နေအောင် စုပ်ပေးလိုက်တော့သည်။လီးအရည်ပြား တလျှောက် ပြောင်စင် သွားသည်နှင့် ဒေါက်တာမင်းသူမှာ ဝတ်ရည်ဖူး ပါးစပ်ထဲမှ လီးအား ဆွဲထုတ်ကာ အဝတ်စားများ ပြန်ဝတ်နေ၏။
” ကဲ … နက်ဖန် … နေ့လည်ပိုင်း တခေါက်လာမယ်နော် “
ဝတ်ရည်ဖူး ပါးပြင်အား တချက်နမ်းကာ ဒေါက်တာမင်းသူ အခန်းတံခါးပေါက်ဘက် လျှောက်လာတော့သည်။ဘေးပြတင်းပေါက်မှ ချောင်းကြည့်နေသော ပြည့်စုံအောင်မှာ ကုတင်ပေါ် ခွေခွေလေး မှေးနေသော မယားဖြစ်သူ ကိုယ်လုံးတီးအလှအား တချက်ကြည့်ကာ နောက်ဖေးပေါက်မှ ပတ်ထွက်ရင်း အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းဘက် လျှောက်လာခဲ့၏။အိမ်ရှေ့ ရောက်စဉ် ဒေါက်တာမင်းသူကားလေး ခြံဝန်းထဲမှ မောင်းထွက်သွားသည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။
ဒေါက်တာမင်းသူ ပြန်သွားပြီး ခဏအကြာ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ထထိုင်ရင်း စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်ဝအား အဝတ်ဟောင်း တခုဖြင့် သုတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့၏။ဧည်ခန်းထဲ အရောက် လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင်အား တွေ့လိုက်ရာ မသိမသာလေး ပြုံးမိနေသည်။ပြည့်စုံအောင်မှာ မိန်းမဖြစ်သူအား မြင်သည်နှင့် ဒေါက်တာမင်းသူ ပေါင်နှစ်ဖက်ထမ်းလိုးသည့် ပုံများ ပြန်မြင်ယောင်ကာ မျက်နှာငြိုးကျသွားတော့၏။
” အီး …… အူဝဲ အူငဲ …… အူဝဲ “
ပြီးခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပျက်များအား ပြန်တွေးရင်း ကလေးငိုသံကြောင့် အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ကာ နို့ဗူးလေး ပါးစပ် တပ်ပေးရင်း ပွေ့ချီထားလိုက်သည်။ကလေး ၃လ ကျော်လာသည်အထိ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ပြည့်စုံအောင်အား အရွဲ့တိုက်ကာ အိမ်သိပ်မကပ်ပဲ လမ်းသလား နေပြန်သည်။ပြောလိုက်သည်နှင့် လင်မယား လမ်းခွဲရန်သာ ဝတ်ရည်ဖူး ဘက်မှ တုံ့ပြန်လေ့ရှိ၏။နောက်ဆုံး ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် မယားဖြစ်သူအား အောက်ကြို့တောင်းပန်ကာ ကတိ အထပ်ထပ် ပေးလိုက်ရ၏။
ထိုကတိမှာ လမ်းမခွဲလျင် ဝတ်ရည်ဖူး ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်စုံအောင်ဘက်က လိုက်လျော ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ကလေး မျက်နှာနှင့် ပြည့်စုံအောင်မှာ အကုန်လိုက်လျော ပေးခဲ့ရသည်။
” တူတူ … တူတူ … တူ…… “
” ဟဲလို … ဖူးလေးလား “
” ဟဲလို မနေနဲ့ … အမြန်လာ ကတိပေးပြီးသားနော် “
” အင်းပါ … မောင်လာပြီနော် “
ဝတ်ရည်ဖူး ပေးသော လိပ်စာအတိုင်း ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တခု၏ လူတစ်ရပ်ကျော် အုတ်နံရံ အစိမ်းကြီး ကာရံထားတဲ့ ခြံဝင်းကြီးထဲ မောင်းဝင်ခဲ့လိုက်သည်။ခြံထဲရောက်တော့ ကား၁၅စီးလောက် တန်းစီ ရပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရပြန်၏။
” မြန်မြန် … လူတောင် စုံနေပြီ “
လေးထပ်တိုက်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူး စကားသံ ပေါ်လာသည်။ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် စကားတခွန်းမှ မပြောပဲ မယားဖြစ်သူ နောက်မှ ကပ်လိုက်ခဲ့တော့သည်။လက်ပြက်အင်္ကျီ အနက်လေးနဲ့ ဒူးဖုံးစကပ် အကျပ်လေး ဝတ်ထားသော မယားဖြစ်သူမှာ ရင်သားစိုင်ထွားထွား လက်မောင်းအိုးဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ခါးအောက် ဖင်သားစိုင်တွေက လမ်းလျှောက်တိုင်း ရမ်းခါနေပြန်၏။
အိပ်ခန်းတခန်းထဲ ဦးတည်နေသဖြင့် ပြည့်စုံအောင်မှာ ရင်ခုန်နေရသည်။စိတ်ဆိုးပြေကာ အလိုးခံတော့မည်လားဟု တွေးရင်း အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ အထင်နှင့် အမြင် လွဲသွားရ၏။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ပလက်စတစ် အကြည်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အထုပ်တထုပ် မှန်ကောင်တာထဲမှ ယူပြီး ပြည့်စုံအောင်အား ပေးလိုက်သည်။ပြည့်စုံအောင် ဖွင့်ကြည့်ရာ အနက်ရောင် ဝတ်စုံတွေနှင့် ဖန်စီမျက်နှာဖုံး တခုတွေ့လိုက်ရ၏။
” အဝတ်စားတွေ ချွတ်လိုက် … အဲ့တာတွေ ဝတ် …… အပြင်ထွက်ပေးမယ် … ၁၀မိနစ်ပဲ “
” ဟမ် “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ပြည့်စုံအောင် အာမေဋိတ်သံအား ဂရုတောင်မစိုက်ပဲ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားခဲ့သည်။ပြည့်စုံအောင်မှာ ဘာနေနေ လုပ်ပေးဖို့ ကတိပေးပြီးသားမို့အထုပ်ထဲက ဝတ်စုံကို ထုတ်ဝတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်သည်။BAD MAM လိုလို ဘာလိုလို နဲ့ ကိုယ်ကျပ် အဝတ်စားတွေမို့ ရယ်ချင်စိတ်လေး ဖြစ်ပေါ်နေ၏။အတွင်းခံ ပါမလာသဖြင့် ပေါင်ကြားမှ လီးက အမြှောင်းလိုက်ကြီး ဝတ်စုံအပျော့သားအောက် ထင်းနေတော့သည်။
၁၀မိနစ် ပြည့်သည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူး ပြန်ဝင်လာပြီး လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင်အား သေချာကြည့်လိုက်၏။ တကိုယ်လုံး လှည့်ကြည့်ပြီးမှ အားရကျေနပ်တဲ့ အသံနှင့် အခန်းထဲက ခုံတစ်လုံးပေါ် ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြန်သည်။
အဝတ်စားများအား သေချာ ဆွဲဆန့်ပြီး ပြည့်စုံအောင် မျက်နှာအား နှာခေါင်းထိ ဖုံးသော မျက်နှာဖုံး တပ်ပေးနေသည်။ပြည့်စုံအောင်မှာ ဘာလုပ်မလည်း တွေးရင်း ရင်ခုန်နေရပြန်၏။ပြီးသည်နှင့် မယားဖြစ်သူ ခေါ်သည့်နောက် လိုက်လာခဲ့သည်။အိမ်အပေါ်ထပ်တက်ရင်း ပထမထပ် ကျော်ကာ ဆက်တက်လာခဲ့ရပြန်၏။
ဒုတိယထပ် ကျမှ တီးလုံးသံ စကားပြောသံ ခပ်တိုးတိုး ကြားလိုက်ရသည်။အိမ်အရှေ့ဘက်ခြမ်း ဟောခန်းရဲ့ အစွန်ဆုံး အခန်းတံခါးရှေ့ရောက်တော့ ဝတ်ရည်ဖူးမှ တံခါးအား ဆွဲဖွင့်တော့၏။မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ပြည့်စုံအောင်မှာ အံအောနေရသည်။
ပြည့်စုံအောင် ဝတ်ထားသော ဝတ်စုံပုံစံများနှင့် ယောင်္ကျားရင်မကြီးများ လည်ပင်းအား စတီးကြိုးလှလှလေးတွေပတ်ကာ လေးဘက်ထောက် အနေထားနဲ့ ခွေးတွေလို မိန်းမတွေသွားတဲ့နောက် လိုက်နေကြသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်၏။
မယားဖြစ်သူအားဝ ကြည့်တော့ မဲ့ပြုံးလေး ပြုံးကာ အခန်းထဲ ဝင်သွားသဖြင့် နောက်မှ ကပ်လိုက်သွားခဲ့ပြန်သည်။အခန်းထဲတွင် ဝတ်ရည်ဖူးလို ခပ်ချောချော မိန်းမ ၁၀ယောက်ထက် မနဲ ဆက်စီ အဝတ်စားများနှင့် ဝိုင်သောက်တဲ့ သူကသောက် ဘီယာသောက်တဲ့သူကသောက် စကားပြော ရယ်မောသံများ ဆူညံနေ၏။ယောင်္ကျား အားလုံး မျက်နှာဖုံး များ တပ်ဆင်ထားရင်း အမ်ိန့်ပေးသမျှ အကုန်လုပ်ပေးနေ ရ၏။ အံအောထိတ်လန့် နေတုန်း မယားဖြစ်သူဆီက စကားသံ ထွက်ပေါ်လာရာ ကျက်သေသေသွားမိသည်။
” ဒီလာစမ်း … ငါ့ ကျွန်လေး လည်ပတ် ပတ်ပေးမလို့ ……လေးဖက်ထောက်လိုက် “
ရုတ်တရက် စိတ်ထဲ ဖျင်းကနဲ့ ခံစားမိကာ မျက်မှောင်ကြုံ့လိုက်မိ၏။သို့သော် ကတိပေးထားမိသဖြင့် အံကြိတ်ကာ ဆိုဖာခုံပေါ် ထိုင်နေသော မယားဖြစ်သူ ခြေသလုံးရှေ့ လေးဖက်ထောက်လိုက်ရသည်။
” ကဲ … ဒီ ကြိုးတွေ ထဲက … ကျွန်လေး ကြိုက်တာရွေး … ခ်ခ် ခ်ခ် “
လည်ပြန်မော့ကြည့်ရာ ဝတ်ရည်ဖူးပေါင်ပေါ် ခွေတင်ထားသော စတီးကြိုးလှလှလေး ၃ခွေအား တွေ့မြင်ရ၏။ ပြည့်စုံအောင်မှာ စတီးကြိုးများအား စိတ်မဝင်စားပေ ဝတ်ထားသော ဝတ်စုံနှင့် ခွေးလို လေးဖက်ထောက် နေရသော အနေအထာအား ဘယ်သူတွေ ကြည့်နေမလဲ တွေးရင်း စိတ်ခြောက်ခြားလာရသည်။မျက်နှာဖုံး တတ်ထားသော်လည်း အရှက်တရားများ ကြီးစိုးနေ၏။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ပြည့်စုံအောင် ဖြစ်ပျက်နေသသည်ကို အရသာခံ ကြည့်နေလိုက်၏။
” ဘယ်လိုလဲ … ယောက္ခမကို … မိန်းမ မသိအောင် … ခိုးလိုးတုန်းက … မရှက်ဘူးလား … ဖြန်း …… အ “
ရုတ်တရက် ပါးရိုက်ခံလိုက်ရ၍ ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် ဆက်စီ မိန်းမချောတွေကြားထဲ ရှက်ရွံ့လာကာ မျက်ရည်များ ဝဲလာတော့သည်။ထိုအချိန် ဘေးမှ မိန်းမချောများက မယားဖြစ်သူ နာမည်အား ရေရွတ်ကာ လက်ခုပ် ဝိုင်းတီး ပေးကြ၏။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ခနဲ့ပြုံး ပြုံးရင်း ပြည့်စုံအောင် လည်ပင်အား ခွေးလည်ပတ် စတီးကြိုးတခု တပ်ဆင်လိုက်ရာ လက်ခုပ်သံများ ပိုပြီး ဆူညံလာတော့သည်။
” အနေအထား … သဘောကျရဲ့လား … မကြိုက်ရင် ကတိဖျက်ပြီး ပြန်တော့ “
” ငါ … ငါ …… “
” ဘာ ငါလည်း … ! တောက် ! “
” အ … နာလိုက်တာ ဟာ “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လည်ပင်းကြိုးအား စောင့်ဆွဲလိုက်သဖြင့် ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် ညည်းတွား လိုက်မိသည်။
” နင် … ငါ့ မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ဖြေစမ်း … ရှက်နေပေမဲ့ … ကျေနပ်တယ် မလား “
” ကျေ ကျေ … ကျေနပ်ပါတယ် “
” ချချ ချချ … ဟား ဟားးးးး “
ဝတ်ရည်ဖူး လှောင်ရယ်သံကြောင့် ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် မျက်နှာတပြင်လုံး ရဲတက်သွားကာ သိမ်ငယ်စိတ်များ ဝင်ရောက်လာတော့သည်။
” ခုချိန်ကစပြီး နင်က ငါ့ရဲ့ ကျွန်ပဲ ငါခိုင်းတာ အကုန်လုပ် စောတက မတက်နဲ့ … တလ ၄ကြိမ် … နင့်ကို အပစ်ပေးမှာ ကြားလား “
” ကြား ကြား … ကြားပါတယ် ဟာ “
” အေး … နင် ငြင်းဆန်တဲ့ နေ့က … ငါနဲ့ လင်မယား ပြတ်ဆဲတဲ့ နေ့ပဲ “
” ဟိတ် … သားလေး … မင်းတို့ လင်မယား ပြန်အဆင်ပြေနေ ပြီးလား “
” ဒီလိုပါပဲ …… အန်တီမိုး ရယ် “
ဧည့်ခန်းထဲ မနက်စာ အတူစားရင်း ယောက္ခမ ဖြစ်သူအား ပြည့်စုံအောင် တယောက် ပြန်ဖြေ နေ၏။
” ဒီနေ့ အလုပ်နားရက် … မလား … ဘယ်သွားကြမလို့တုန်း “
” သူသွားချင်တဲ့ဆီ … လိုက်ပို့ပေးရမှာ … ကလေး ဂရုစိုက်ဦးနော် … အန်တီမိုး “
” အေးပါ …… မင်းတို့ လင်မယား အဆင်ပြေတာ မြင်ရတော့ … ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ “
ခဏအကြာတွင် ပြည့်စုံအောင်တို့ လင်မယား ကားလေးဖြင့် အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့သည်။ဝတ်ရည်ဖူး မောင်းလာသည့်ကားလေးမှာ အမြန်လမ်းမကြီး အတိုင်း မြို့စွန်သို့ ဦးတည်နေ၏။
” တူတူ …… တူ ……… “
ဖုန်းသံ မဆုံးခင် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ကားမောင်းရင်း လက်တဖက်ဖြင့် ယူဖွင့်လိုက်သည်။
” ဟဲလို …… ဝတ်ရည် …… လာပြီလား … ဘယ်ရောက်ပြီလည်း “
” လာနေပါပြီ … ဦးနိုင်ရယ် … ရောက်တော့မယ် … ပစ္စည်းတွေ အဆင်သင့်ပဲလား “
” အဆင်သင့် လုပ်ထားပါတယ် … စိတ်တိုင်း ကျစေရမယ် “
” Ok လေ … ဒါပဲနော် …… ရောက်တော့မယ် “
တဖက်က ဖုန်းချသွားသည်နှင့် ကားလေးမှာ အရှိန်မြင့်မောင်းနေ၏။တဖြည်းဖြည်း လယ်ကွင်းများ ကျော်လွန်လာကာ လမ်းမကြီး အနောက်ဖက် တည့်တည့် ချိုးမောင်း လိုက်ပြန်သည်။သရက်ပင်ကြီးများ တန်းစီနေကာ ခဏအကြာ ခြံကြီး တခြံ တွေ့လိုက်ရ၏။ ခြံကျယ်ကြီးထဲ သရက်ပင်များ မာလကာပင်များ တန်းစီစိုက်ထားရာ တခြံလုံး သစ်ပင်ရိပ်များဖြင့် အေးမြနေသည်။ခြံထဲ အရောက် ရေမြှောင်းတံတားအား ကျော်ကာ လျောက်လာရင်း နှစ်ထပ်တိုက် အဖြူလေး တစ်လုံး တွေ့မြင်လိုက်ရပြန်၏။
” ကျွန် လေး “
” ခင်ဗျာ “
၁လ ၄ကြိမ် ကျွန်လုပ်ပေးရမည်ဟု ကတိခံထားရသဖြင့် ပြည့်စုံအောင်မှာ မရည်ရွယ်ပဲ လေးလေးစားစား ပြန်ထူးမိသည်။ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ တချက်ရယ်မောရင်း ကားပေါ်ကအဆင်း ပြည့်စုံအောင်အား လေးဖက်ထောက် လိုင်လာရန် အမိန့်ပေးလိုက်တော့သည်။ပြည့်စုံအောင်မှာ မယားဖြစ်သူ စိတ်တိုင်းကျ ကားပေါ်မှ လေးဖက်ထောက် ဆင်းလိုက်ရ၏။မြို့စွန် ခြံဝင်းထဲ လူသွားလူလာ မရှိ၍သာ ပြည့်စုံအောင် အရှက်မရပေ။ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဒူးဖုံးစကပ်လေးဖြင့် နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်သို့ လျှောက်သွားရာ လေးဘက်ထောက်၍လိုက်ခဲ့ရသည်။
” က်ြီ … က်ြိ “
တိုက်ရှေ့အရောက် သူမပါသာ တံခါးဆွဲဖွင့်ကာ ဧည့်ခန်း တောင်ဘက်ရှိ အခန်းတခန်းဆီသို့ ဝင်ချသွား၏။ပြည့်စုံအောင် လေးဖက်ထောက် ဝင်လိုက်သည်နှင့် ဖန်စားပွဲခုံတစ်လုံး၏ အနောက်ဖက် လူ၎ဦး ထိုင်ရသော ဆိုဖာ သရေခုံရှည်ကြီးပေါ် အသက် ၅၀ခန့် လူကြီးတစ်ဦး ထိုင်နေသည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ပြည့်စုံအောင် ရှက်စိတ် အနည်းငယ် ဝင်လာသော်လည်း လူစိမ်း တစ်ယောက်ထဲမို့ အားတင်း ထားလိုက်ရ၏။ထိုလူကြီး ရှေ့ရှိ ဖန်စားပွဲခုံပေါ်တွင် ဘီယာပုလင်းများ ဝိုင်ပုလင်းများ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပြင်ဆင်ထားသည်။
” ကျွန်လေး … ဟို မှန်ကောင်တာလေးထဲ ကြည့်စမ်း … မြင်လား “
မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးစကားကြောင့် လက်ညိုးထိုးသော နေရာအား လှမ်းကြည့်ရာ ပထမခေါက်က ဝတ်ရသော ဝတ်စုံပုံစံများနှင့် အချွန်အတက်ပါသော လည်ပတ်များ သံကြိုးများ ကြာပွတ်များ တွေ့ရှိလိုက်ရသည်။မှန်ကောင်တာအား ငေးကြည့်နေစဉ် ဝတ်ရည်ဖူး ဆီမှ အသံထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။
” အဲဒီ … ဝတ်စုံနဲ့ … ပစ္စည်းတွေ … ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး …… ငါ့ဆီ ယူလာခဲ့ “
ပြောပြီးသည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်နေသော လူကြီး ဘေးနား ဝင်ထိုင်လိုက်၏။ ပြည့်စုံအောင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးရင်း ခွေးလို လေးဖက်ထောက်သွားပြီး ကောင်တာထဲမှ ဝတ်စုံနှင့် ပစ္စည်းများအား ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ကာ ဝတ်ရည်ဖူး ခြေရင်းနား တခုချင်း ချပေးရတော့သည်။
” ကဲ … အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက် … ဒါတွေ ဝတ် “
” ဟို ဟို …… “
ပြည့်စုံအောင်မှာ လင်မယားချင်း တုံးလုံးချွတ် လိုးဖူးသဖြင့် မရှက်သော်လည်း ခုံပေါ်ထိုင်နေသော လူကြီးကြောင့် အခက်တွေ့နေ၏။
” ဘာ …… တဟိုဟို လုပ်နေတာလဲ … ခု မတ်တက်ရပ် …… အကုန်ချွတ်စမ်း “
ပြည့်စုံအောင် တယောက် မျက်နှာလေး ရဲကာ အဝတ်စာများ ချွတ်ချပစ်တော့၏။ အဝတ်စား ကိုယ်ကြပ် အတိုလေးများ ဝတ်ပြီးချိန် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ သရေလည်ပတ် အနက်တခု ပြည့်စုံအောင် လည်ပင်းအား ပတ်ပေးလိုက်သည်။
” နင် အခုကစပြီး … ငါ့ရဲ့ခွေးကျွန် … ဖြစ်သွားပြီ ကြားလား “
ဝတ်ရည်ဖူး စကားအဆုံး ပြည့်စုံအောင် တယောက် သိမ်ငယ်စိတ်များ ဝင်လာကာ စ်ိတ်ခွန်အားများ ကျဆင်းသလို ခံစားနေရတော့၏။
” ငါ့ကို သခင်မလို့ ခေါ်ရမယ် … သေချာမှတ်နော် …… ဒါက နင့်ရဲ့ သခင် …… သူ့ကိုလည်း သခင်လို့ ခေါ် ကြားတယ်နော် “
” ကြား ကြား … ကြားပါတယ် …… သခင်မလေး “
အသံတုန်ရီစွာဖြင့် ပြောလိုက်သော ပြည့်စုံအောင် အသံကြောင့် ဝတ်ရည်ဖူး တစ်ယောက် အားရကျေနပ်နေသည်။ ထို့နောက် လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ဖက်အား သရေကွင်းအပြားများ ပတ်ပေးကာ ထိုသရေကွင်း အပြား လေးခုအား စတီးကြိုး ချိတ်များဖြင့် ချိတ်ထားလိုက်တော့၏။ခြေနှစ်ဖက် လက်နှစ်ဖက်အား စတီးကြိုးခံ၍ ပေါင်းပြီး သော့ခတ်ပြန်သည်။
” ပြီးရင် … ထိုင်ခိုင်းလိုက်တော့ … ဝတ်ရည် … ဦးနိုင် တင်းနေပြီကွ “
တချိန်လုံး ဘာတခွန်းမှ မပြောပဲ ထိုင်ကြည့်ရင်း ဘီယာသောက်နေသော လူကြီးထံမှ စကားသံ ထွက်ပေါ်လာ၏။ပြည့်စုံအောင် မော့ကြည့်လိုက်ရာ မျက်နှာလေးထောင့် စပ်စပ် နှာခေါင်းပွပွနှင့် နူတ်ခမ်းထူထူ လူကြီးအား အနီးကပ် တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။မယားဖြစ်သူ ပုခုံးသားလေးအား ဘယ်လက်ဖြင့် သိုင်းဖက်ရင်း ညာလက်က ဒူးဖုံးစကပ် အပျော့သားလေးအား ဒူးအထက်နားမှ ပေါင်ရင်းထိ အသွားအပြန် ပွတ်သပ်ပေနေ၏။ပြည့်စုံအောင် မျက်နှာတချက် ပြက်သွားရသည်။ ကတိပေးရာတွင် သူစိမ်းယောင်္ကျာအား အလိုးမခံတော့ကြောင်း ဝတ်ရည်ဖူးဘက်က ထုတ်ပြောခဲ့၏။
စကားပြောရန် ပြင်လိုက်စဉ် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ခေါင်းပေါ်မှ ဂေါက်သီးအရွယ် ရာဘာ အလုံးလေးပါသော သရေကြိုးပျော့လေးအား စွပ်ချလိုက်ပြန်သည်။ပါးစပ်ဟလိုက်ချိန် ပါးစပ်ပေါက်ထဲ ရာဘာအလုံးလေး ဖိထည့်ပစ်၏။
” အု … ဝူးးးး ဝု ဖလု “
ပြည့်စုံအောင် စကားပြောရာ တဝူးဝူး ဖြင့်သာ ဗလုံးဗထွေး အသံများ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။လက်နှစ်ဖက်မှာလည်း ခြေချင်းဝတ်ဖြင့် တွဲပြီး သော့ခတ်ထားသဖြင့် ပါးစပ်မှ သရေကြိုးအား ဆွဲဖြုတ်မရတော့ပေ။
မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူး၏ ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ အသားရည်ကြောင့် အင်္ကျီကိုယ်ကြပ်လေး အောက်က ရင်သားစိုင်အပေါ်ခြမ်းလေး ခပ်ရေးရေး မြင်တွေ့နေ၏။ ဦးနိုင်ဆိုသော လူကြီး၏ ဘယ်လက်မှာ သိုင်းဖက်ရင်း အင်္ကျီကိုယ်ကြပ်လေးထဲ လက်သွင်းပြီး ဘရာစီယာ ကြိုးကိုင်းလေးအား ပုခုံးဘေး ဆွဲချနေပြန်သည်။ညာလက်က စကပ်အပျော့သား အောက်နားစမှ အပေါ်ပင့်နိူက်ရာ ဝတ်ရည်ဖူး၏ ပေါင်သားဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်လေး မြင်နေရ၏။
ပြည့်စုံအောင်မှာ မယားဖြစ်သူ ခြေနှစ်ချောင်းရှေ ဒူးကွေးစုကာ ဖင်ချထိုင်နေရသဖြင့် မယားဖြစ်သူ ပေါင်ဂွထဲ သူစိမ်းယောင်္ကျားလက်တဖက် တိုးဝင်းနေရာ
ကြည့်ရင်း အာဂေါင်များ ခြောက်ကပ်လာတော့သည်။ထိုစဉ် ဆံနွယ်များ စုချည်ကာ နောက်ကျောဘက် ပို့ထားသော ဝတ်ရည်ဖူး၏ နူတ်ခမ်းဖူးဖူး ရဲရဲလေးအား ဦးနိုင်မှ သူုနူတ်ခမ်း အထူကြီးဖြင့် ဆွဲစုပ်နေပြန်၏။ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် နူတ်ခမ်းလေးအား အစုပ်ခံရစဉ် ဦးနိုင်ဘယ်လက်က သိုင်းဖက်ထားရင်း ဘလာစီယာလေးထဲမှ နို့အုံလေးအား ညှစ်ခြေပေးနေသည်။
ဝတ်ရည်ဖူး ရင်ဘတ်လေး ကော့တက်လာကာ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား မသိမသာလေး ဖြဲပေးလိုက်၏။
ဦးနိုင် ဘယ်လက်က တဖြည်းဖြည်းဘလာစီယာ အောက်ရောက်လာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ပွတ်ချေရင်း ညာလက်က ပေါင်ခြံထဲမှ စောက်ပတ်အုံလေးအား အတွင်းခံ ဘောင်ဘီပေါ်မှ ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်သည်။ဝတ်ရည်ဖူးမှာ မငြင်းဆန်သည့်အပြင် ဦးနိုင် ပေါင်ကြားအား ဘောင်းဘီအပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ရင်း နူတ်ခမ်းထူထူကြီးအား ပြန်လည်ဆွဲစုပ်ပေး၏။
ပြည့်စုံအောင်မှာ မယားချောလေး ဝတ်ရည်ဖူး၏ အပြုအမှုကြောင့် ဝမ်းနည်းစိတ်တဝက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်စိတ် တဝက်ဖြင့် စိတ်ထဲ ဒွိဟဖြစ်နေရသည်။
မျက်နှာရှေ့ မယားဖြစ်သူ စကပ်အောက်နားစလေး ပေါင်ရင်းကပ်နေရာ ဦးနိုင်၏ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေပေးမှု့ကြောင့် အတွင်းခံဘောင်ဘီးလေးမှာ စောက်ရည်များ ရွှဲနေသည်ကို မြင်နေရပြန်၏။ ထိုချိန် ဦးနိုင်မှာ ဝတ်ရည်ဖူး ပေါင်ကြားမှ ညာဘက်လက်အား ပြန်ထုတ်ကာ သူ့ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်လိုက်တော့သည်။ဇစ်ပွင့်သည်နှင့် အတွင်းထဲ အမြှောင်းလိုက်ကပ်နေသော လီးအား ဝတ်ရည်ဖူးမှ သူမလက်လေးဖြင့် ဆွဲထုတ်ကာ ဂွင်းထုပေးပြန်၏။
ခဏအကြာ ဦးနိုင်ညာလက်မှာ ဝတ်ရည်ဖူးပေါင်ကြားထဲ ပြန်ရောက်လာပြီး အတွင်းခံဘောင်ဘီဂွလေးအား လက်ညိုးလေးဖြင့် ဘေးချိတ်ဆွဲကာ လက်ခလယ်အား စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။စောင်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်းလေး ဝင်လာသည်နှင့် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ သူမလက်ထဲ ဒစ်ဖူးမှအရည်ကြည် စို့ကာ မာလာသော လီးကြီးအား ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားမိ၏။ဦးနိုင်ကလည်း ဝတ်ရည်ဖူး ခံစားမှု့မြင့်တက်လာသည်ကို ကြည့်ရင်း တဆင့်တက်ကာ စောက်ပတ်လေးထဲ လက်ခလယ်ရော လက်သကြွယ်ပါ ၂ချောင်းပူး သွင်း၍ ခပ်သွက်သွက်လေး အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်တော့သည်။
” အ အားးးး …… အဟင့် ဟင့် …… ရှီးးးးး အ အ …… မ ရ တော့ ဘူးးး …… ရှီးးး အမလေးးး “
ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် ပေါင်တန်များ တဆက်ဆက်တုန်ကာ ခေါင်းလေး မော့တက်ရင်း ဦးနိုင် လက်ကောက်ဝတ်အား သူမ လွတ်နေသော လက်တဖက်ဖြင့် ဖမ်းထိန်းကာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်တော့၏။
” ကောင်လား … ဝတ်ရည် “
” ဦးနိုင်ကိုလည်း … ကောင်းအောင် လုပ်ပေးလေ … ရော့ လီးစုပ်ပေး “
ဦးနိုင် စကားကြောင့် ဝတ်ရည်ဖူး မျက်နှာလေး အမ်းတန်းတန်း ဖြစ်ကာ သူမခြေထောက်ရှေ့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်နေသော လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင် မျက်နှာအား ခိုးကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ပြည့်စုံအောင်၏ ဝေခွဲမရသော မျက်နှာအား တချက်ကြည့်ကာ ဦးနိုင် ဒစ်ကြီးအား ဆွဲစုပ်လိုက်၏။ထို့နောက် ဒစ်ဖူးအား လျှာဖြင့် လိပ်ဆွဲကာ
လီးတန်တလျှောက် လျှာဖြင့် အထက်အောက် ယက်ကာ မက်မက်မောမော စုပ်နေတော့သည်။လီးထိပ်အား နူတ်ခမ်းလေးဖြင့် တေ့စုပ်ရင်း ဘောင်ဘီအတွင်းထဲ လက်နိုက်ကာ လီးအရင်း အောက်ဖက် လဥများအား ညှစ်ချေပေးရာ ဦးနိုင်တယောက် တရှီးရှီးဖြင့် ဖင်ကြွလာရ၏။
” အားးးး အ … ကောင်းလိုက်တာ ဝတ်ရည်လေးရာ … နာနာလေး ဆွဲစုပ် ဟုတ်တယ် …… အီးးးး ရှီးးးး လျှာနဲ့ ဒစ်ကို … ပတ်ယက်ပေးဦး … အားလားလား …… ဟူးးး ရှီးးးးး ‘
ညည်းသံများ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဦးနိုင်လက်တဖက်မှာ ဝတ်ရည်ဖူးခေါင်းအား ဖိချလိုက်တော့သည်။လီးကြီးမှ လည်ချောင်းထဲ တိုးဝင်လာရင်း ဒစ်ဖူးမှ အာခေါင်လာထောက်သဖြင့် ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် တဟွတ်ဟွတ် သီးနေပြန်၏။လည်ပင်းကြောလေးများ ထောင်လာကာ ပါးလေးနှစ်ဖက်ဖေါင်းလာစဉ် လရည်များ ပန်းထည့်ခံရလိုက်သည်။ဆက်ကနဲ့ ခေါင်းကြွလိုက်ပေမယ့် ဦးနိုင်မှ သူမခေါင်းအား လက်ဖြင့်ဖိထားသဖြင့် လည်ချောင်းထဲ ဝင်လာသမျှ လရည်များအား တဂွတ်ဂွတ်ဖြင့် မျိုချလိုက်ရ တော့၏။
” အားဟား … တအား ကောင်းလွန်းလို့ မထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားရတယ် … ဦးနိုင်ကို စိတ်ဆိုးသွားလား ကွာ “
” ဟွန့် … သွား … မပြောမဆိုနဲ့ လုပ်ပြီးမှ “
ပြည့်စုံအောင်မှာ မယားဖြစ်သူ ပါးစပ်ထဲ လရည်များ ပန်းထည့်ခံရသဖြင့် မျက်နှာပျက်နေရှာသည်။သို့သော် ပါးစပ်ထဲ ရာဘာလုံးလေး ထည့်ထားခံရသဖြင့် နူတ်မှ ထုတ်ပြောလို့ မရတော့ပေ။
” ဝတ်ရည်လေးက … လီးစုပ် တအားတော်တာကိုးကွ … ခိခိ … ကဲ အဝတ်တွေ ချွတ်ပြဦးနော် “
စကားဆုံးသည်နှင့် ဦးနိုင်လက်နှစ်ဖက် မနားတမ်းအလုပ်ရှုပ်ကာ ဝတ်ရည်ဖူး အဝတ်စားများအား ဆွဲချွတ်တော့သည်။အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ပြီးသည်နှင့်
ဘရာစီယာလေးအား ချိတ်ဖြုတ်ပစ်ရာ နို့အုံဖွေးဖွေးလေး နှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး နို့သီးခေါင်း နီတာရဲလေးနှစ်ခုက ချွန်ထွက်နေ၏။ အတွင်းခံ ဘောင်ဘီးလေး ဆွဲချွတ်ရာ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင်အား ခိုးကြည့်ရင်း ဖင်ကြီး ကြွပေးလိုက်ပြန်သည်။ ပေါင်ခြံအလယ်မှ အမွှေးပါးပါးလေး ဖုံးအုပ်ထားသော စောက်ပတ်လေးမှာ ပြူထွက်လာတော့၏။
” လှလိုက်တာ … ဝတ်ရည် စောက်ဖုတ်လေးက … ဝါးစားပစ်ချင်တာ … ဟင်းဟင်း “
” အဲတာတော့ … မဖြစ်ဘူးနော် “
” ပြွတ် ပြွတ် … ပလပ် ပလပ် … ပြွတ်စ် “
ဦးနိုင်မှာ နို့သီးခေါင်းလေး ကော့လာအောင် စုပ်ရင်း လျှာဖြင့် ပတ်ယက်ပေးနေပြန်သည်။ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် ရမ္မက်စိတ်များ ပြန်ကြွလာကာ
စောက်ပတ်လေးထဲ တဆစ်ဆစ်နဲ့ ခံစားနေရရှာ၏။နို့စို့ရင်း ဝတ်ရည်ဖူး ဘယ်ခြေထောက်အား ခုံပေါ်ဆွဲတင်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားဖြင့် စောက်ပတ်အုံလေးထဲ လီးထိပ်အား တိုးကပ်လိုက်သည်။
” အ … အဲတာတော့ …… ကျမ ခွင့်မပြုဘူးနော် ……ဦးနိုင် “
” အင်းပါ … အထဲ မထည့်ပါဘူး … ဝတ်ရည်ရယ် ……လီးထိပ်နဲ့ စောက်ပတ်အုံလေး …… ပွတ်ရုံလေးပါ ကွာ “
လီးကြီး အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းထဲ ဖိခွဲလိုက်တိုင်း ဝတ်ရည်ဖူးခေါင်းလေး မော့တက်သွားရ တော့သည်။ပြည့်စုံအောင်မှာလည်း မယားဖြစ်သူ စောက်ဖုတ်ထဲ ဒစ်ကြီး အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲတိုင်း စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ဝင်သွားလေမလားဟု ရင်တထိပ်ထိပ်နှင့် ကြည့်နေရ၏။ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် အောက်နူတ်ခမ်းလေး ကိုက်ကာ လီးထိပ်ကြီး ချော်ဝင်ပါစေဟု စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ဆုတောင်း နေရှာသည်။လင်ဖြစ်သူအား ဘယ်သူစိမ်း ယောင်္ကျားသားကိုမှ အလိုးမခံတော့ကြောင်း ကတိပေးထားသည်မို့ အခက်တွေ့နေရ၏။
ပြည့်စုံအောင်မှာ ဒစ်ကြီး အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းထဲ တွင်သာ အထက်အောက်ရွေ့နေသဖြင့် မယားဖြစ်သူမှ အလိုးမခံကြောင်း သိရသဖြင့် စိတ်အေးနေစဉ် ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ညာခြေထောက်အား ခုံပေါ်တင်ရင်း ဦးနိုင် ခါးအား ချိတ်လိုက်တော့သည်။ထိုအခါ ဝတ်ရည်ဖူး စောက်ပတ်အား ပြည့်စုံအောင် မမြင်ရတော့ပေ ဘေးတိုက်အနေထားနှင့် ပေါင်လုံးကြီးမှာ စောက်ဖုတ်အား ကွယ်သွားရ၏။
” ရှီးးးးးးးး … အားဟား …… ဖိပွတ် ဦးနိုင် … အင်း အင်း …… ဟုတ်တယ် “
လီးထိပ်ဖျားနှင့် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲ ထိုးခွဲကာ စောက်စိလေး ကလော်မိသဖြင့် ပေါင်တန်များ တုန်ကာ ဖင်ကြီး မြှောက်တက်လာပြန်သည်။ပြည့်စုံအောင်မှာ ကြည့်ရင်း မျက်နှာပျက်လာတော့၏။မယားဖြစ်သူ ဖင်ကြီး ကြွတက်လာကာ ခေါင်းလေးမော့တက်သွားသဖြင့် အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားမှန်း ရိပ်မိလိုက်သည်။သို့သော် မမြင်ရသဖြင့် စိတ်ထဲ မရိုးမယွ ခံစားနေရ၏။ဝတ်ရည်ဖူးမှာလည်း ဦးနိုင်အား မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားနှင့် ခါးပေါ်ခြေနှစ်ဖက် ညှပ်ချိတ်ကာ လက်နောက်ပြန်ထောက်ရင်း ဖင်ကြီး ကြွလိုက် ပြန်ချလိုက်ဖြင့် တအီးအီး ညည်းနေတော့သည်။
တဇွိဇွိ တဗွိဗွိဖြင့် အသံများထွက်ပေါ်လာရင်း ဝတ်ရည်ဖူး လက်နှစ်ဖက်က ထိုင်ခုံကတီဘာ အခင်းကို ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ပြီး ဖင်သားစိုင်ကြီး တဇပ်ဇပ် တုန်ပြီး ခဏအကြာမှ ငြိမ်ကျသွား၏။
” ဦးနိုင်က … တန်းလန်းကြီး … ဝတ်ရည်ရယ် … အပေါ်ကနေ … ပွတ်ပေးပါ့လား “
” ဟူးးးး ရှီးးးးး ……… အင်း … ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှန်ပေးလေ “
ဦးနိုင်မှာ ပြည့်စုံအောင် ဘေးနား ပက်လက်လှန်ရာ လီးကြီးမှာ စောက်ရည်များနှင့် တင်းပြောင်နေကာ ထောင်ထွက်နေသည်။ပြည့်စုံအောင် တယောက် ဦးနိုင်ပေါင်ကြားမှ လီးကြီးအား အနီးကပ် သေချာစိုက်ကြည့် လိုက်ပြန်၏။စောက်ရည်များမှ လီးထိပ်တွင်သာ မက လီးအရင်းဘက် လမွှေးများပေါ်ထိ ရွှဲနေရာ ပြည့်စုံအောင် စိတ်ထဲ မတင်မကျ ခံစားနေရသည်။စောက်ပတ်ထဲ လီးမဝင်ပဲ လီးအရင်းထိ စောက်ရည်များ ရွှဲနေသည်မှာ သဘာဝ မကျလှပေ။
စဉ်းစားနေစဉ် မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဦးနိုင် လီးပေါ်ခွထိုင်ပြီး လီးထိပ်အား ဖမ်းကိုင်ရင်း လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကာ ချက်ပေါ်လှန်ဖိလိုက်၏။အမြှောင်းလိုက် လှန်ထားသော လီးတန်အား စောက်ပတ်အက်ကွဲကြောင်း အတွင်း ထည့်ကာ ဖိထိုင်လိုက်တော့သည်။ခါးကော့ကာ လက်နောက်ပြန်ထောက်ရင်း ခါးအားဖြင့် ဖင်သားစိုင်ကြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ကာ လီးအား ပွတ်ဆွဲပေး၏။
” အား …… အ … ဖိပွတ် … အင်း အင်း ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းပဲ … ဝတ်ရည်ရယ် … အားပါးပါး ရှီးးးးးး “
” ကောင်းရင် ငြိမ်ငြိမ်နေနော် … ဦးနိုင် … ထိပ်ကို အောက်ထဲ ထိ … မရောက်ပေ့စေနဲ့ “
” ဟူးးးး အင်းးး အင့်အင့် …… အောက်ကနေ ပြန်ပြီး ဖင်ကို ဖိကြိတ်ပြီး ပွတ်ပါ ကွာ …… အားဟား “
” ခါးကော့ပြီး ဖိပွတ်ပေးနေတာပဲ … ဦးနိုင်ကလည်း မမြင်ဘူးလား “
” အင်းပါ … ညောင်းရင်ပြော … ဦးနိုင် အပေါ်က ပွတ်ပြီး လရည်ထုတ်ပစ်မှာပါ “
” နေပါစေ ရတယ် … မညောင်းပါဘူး “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လင်ဖြစ်သူ ဘေးထားပြီး ဦးနိုင်အား ပွတ်ခိုင်းလျင် မတော်တဆ စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်ရင် အခက်တွေ့နေရမည်။လင်ဖြစ်သူအား နာကြီးစိတ်နှင့် ပညာပေးနေစဉ် သူမ ဘက်မှ ကတိတည်လိုက်ချင်၏။လီးတန်ကြီးမှာ ဝတ်ရည်းဖူး စောက်ပတ် အက်ကွဲကြောင်းထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြင့် ဒစ်ဖူးက စောက်စိလေးအား ထိုးမိနေပြန်သည်။
စောက်ပတ် အသားနုလေးများနှင့် လီးအရည်ပြားအား လျှောတိုက်ပွတ်ဆွဲရင်း ကာမစိတ်များ ထိန်းမရအောင် ထကြွနေရတော့သည်။ လီးကြီးအား ဖိလိုက်ပွတ်လိုက် ဖြင့် စောက်ရည်များ ဒုတိယ အကြိမ် စို့လာခဲ့၏။
” ပြီးတော့မယ် … ဝတ်ရည် … အားဟား … မြန်မြန်လေး လုပ်ကွာ … ရှီးးးးးးးး အင်း “
ဦးနိုင်စကားကြောင့် ဝတ်ရည်ဖူး ရမ္မက်စ်ိတ်လေး တရှိန်းရှိန်း တက်လာကာ စောက်ရည်များ ပွက်ကနဲ့ ကျလာရင်း ဒစ်ဖူးကျော်သည်အထိ ပွတ်ချလိုက်မိသည်။နောက်ပြန် လက်ထောက်လျက် အနေထားဖြင့် ခါးကော့ထားသည်မို့ ဖင်ကြီးနောက်ပြန်အဆွဲတွင် အရှိန်လွန်လာသော စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ဒစ်ကြီးချိတ်ပါလာကာ လီးတချောင်းလုံး ဘွတ်ကနဲ့ ဝင်သွားတော့၏။
ရုတ်တရက်မို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာသော လီးအား ညှစ်ပေးနေမိပြန်သည်။လီးအရည်ပြား တလျှောက် တဒုတ်ဒုတ်နှင့် သွေးတိုးလာကာ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားထဲ တင်းကနဲ့ တင်းကနဲ့ ခံစားလာရတော့၏။ခံစားမှု့ မြင့်တက်လာရာ ဘေးနား လင်ဖြစ်သူ ရှိနေသည်ကို မေ့လျော့သွားသည်။
စောက်ပတ်အုံလေးထဲ လီးဝင်သွားသဖြင့် အောက်က ပက်လက်လှန်နေသော ဦးနိုင် တယောက်
စောက်ခေါင်းအတွင်းသား များ၏ နုညံ့မူ့ကို ခံစားရင်း တရှီးရှီး ညည်းတွားနေပြန်သည်။
” အု ဝူးးး …… အု ဝု … ဝူး ဝု “
ပြည့်စုံအောင်မှာ ဘေးနားမှ ကြည့်ရင်း တဝူးဝူးဖြင့် အော်ဟစ်ကာ မကျေနပ်သော အရိပ်အရောင် ပြနေရှာ၏။
” သေချာ လုပ်တာ … မဟုတ်ဖူးးး … အဟင့် ဟင့် …… အ အားးးး … တကယ်ပါ သေ ချာ … မ လုပ် …… အားးးး အမလေးးး ကျွတ်ကျွတ် “
ဝတ်ရည်းဖူး တယောက် လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင်၏ အပြုအမှုကြောင့် စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်ရန် သူမ သေချာလုပ်တာ မဟုတ်ကြောင်း ရွတ်ဆိုကာ စုပ်သပ်နေတော့သည်။ထိုအချိန် ဦးနိုင်မှာ အခွင့်အရေးအား မိမိရရ အသုံးချလိုက်ပြန်၏။ဝတ်ရည်ဖူး ခါးလေးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲက အောက်မှ ၅ချက်ခန့် ဆက်တိုက် ပင့်လိုးပစ်သည်။
” ဗျစ် … အ …… ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “
အားကနဲ့ အော်သံနှင့်အတူ ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် ကော့ပျံကာ ဖင်ကြီး မြှောက်တက်သွားရ၏။
အောက်နှုတ်ခမ်းအား ဖိကိုက်ရင်း ကုန်းထကာ ရရှိနေသော ကာမစည်းစိမ်လေး ပျောက်ကွယ်မှာ စိုးသည်အလား ဦးနိုင်ရင်ဘတ်ပေါ် လက်နှစ်ဖက် ထောက်ရင်း ဖင်ကြီးအား ဝေ့ကာဝိုက်ကာဖြင့် စကောဝိုင်းဝိုင်းသလို ကြိတ်လှည့်ပစ်တော့သည်။ ဖင်သားစိုင်ကြီးအား ကော့လိုက် ဖိချလိုက်ဖြင့် မနားတမ်း ဆောင့်လိုးရာ အချက် ၃၀ကျော်ကျော်တွင် စောက်ခေါင်းထဲ နွေးကနဲ့ ခံစားလိုက်ရ၏။ဦးနိုင်ရင်အုပ်ကြွက်သားများအား ကုတ်ခြစ်ကာ တဘွတ်ဘွတ် ထပ်ဆောင့်ရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ရာ လီးအရင်းမှ လဥကြားထဲ စီးကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် စောက်ရည်များ အိုင်သွားတော့သည်။
” အဟင့် ဟင့် … သေချာ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး … အမလေး … အင့်အင့် … ကောင်း ကောင်း ကောင်းလိုက်တာရှင် … အား အားးး ရှီးးးးးးးးးးးးးးးးး “
ဝတ်ရည်ဖူး တယောက် တတွတ်တွတ် ညည်းတွားရင်း ဖင်ကြီးကြွကာ ဘေးသို့ လိမ့်ချ ပစ်လိုက်၏။ဝတ်ရည်ဖူး ဘေးနား အနားယူနေစဉ် ဦးနိုင်မှာ ပြည့်စုံအောင် ပါးစပ်စီးထားသော သရေကြိုးလေး ဖြုတ်ပေးလိုက်ရာ ပါးစပ်ထဲမှ အလုံးလေး ကျွတ်ထွက်သွားသည်နှင့် ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲစွာ ပြောဆိုနေတော့သည်။
” ခွေးမ … နင် နင် … ပေးပြီးသာ ကတိ ဖျက်တာ … ငါ မကျေနပ်ဖူး မကျေနပ်ဖူး “
” ဖြန်း ဖြန်း … ဟေ့ကောင် မင်း ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း … မင်းက အရင် ဖေါက်ပြန်တာလေ “
ဦးနိုင်မှာ လက်ရော ခြေထောက်ရော သံကြိုးခတ်ခံထားရသော ပြည့်စုံအောင် ပါးအား နှစ်ချက် ဆင့်ရိုက် ပစ်၏။
” ဘာဗျ … ကျုပ်တို့ လင်မယား ကိစ္စ … ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ … ထွီ … သတ္တိရှိရင် ကြိုးဖြုတ်ပေးစမ်း “
” ဟားဟား … မင်းက ခုမှ … မင်း မယား နှမျောနေတာလား … အေး ကြည့်ထားကွာ … ဝှစ် ဖေါင်း … အားးးး အမလေး “
ဦးနိုင်မှာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်နေသော ပြည့်စုံအောင် မျက်နှာအား ခြေထောက်ဖြင့် စောင့်ကန်ရာ ထိုင်လျက်အနေထားဖြင့် နောက်သို့ လှဲကြသွားတော့သည်။
” ဝတ်ရည် … ဦးနိုင် လီး စုပ်စမ်း ဒီကောင် မြင်အောင် စုပ် … လာခဲ့ “
ဖင်ပြန် ခေါင်းပြန် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခန္ဓာကိုယ် တစောင်းအနေထားနဲ့ ဝတ်ရည်ဖူး ပါးစပ်နား လီးထိပ် တေ့ပေးလိုက်၏။လီးကြီး ငုံပြီး စုပ်တဲ့ချိန် ဦးနိုင်မှာလည်း ဝတ်ရည်ဖူး ပေါင်ကြား ခေါင်းတိုးကာ စောက်ဖုတ်အား လျှာဖြင့် ထိုးယက်တော့သည်။စောက်စိလေးစုပ်လိုက် စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးသွင်းကာ မွှေလိုက်နှင့် နှစ်ဦးသား တပြွတ်ပြွတ် တပြတ်ပြတ်နှင့် ယက်စုပ်နေကြ၏။ ခဏအကြာ ဦးနိုင်တယောက် ဝတ်ရည်ဖူးအား သရေထိုင်ခုံပေါ် ပွေ့တင်ကာ ပြည့်စုံအောက်ဘက် ဘေးတိုက်အနေထားဖြစ်အောင် လှည့်ပြလိုက်ပြန်သည်။
ပေါင်၂ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းကာ မီးပွင့်မတတ် ဆောင့်လိုးပြနေ၏။ အားရပါးရ မနားတမ်းလိုးရာ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ တအားအား အော်ရင်း ကြိတ်ခံနေရတော့သည်။အတော်ကြာကြာ ဆောင့်လိုးပြီးမှ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ခိုင်းကာ ခုံပေါ်လက်တင်ခိုင်းပြီး ဖင်ကြီးအား နောက်ဆွဲကော့ခိုင်းလိုက်၏။ပြည့်စုံအောင် မျက်နှာဖက် ဝတ်ရည်ဖူး ဖင်ကြားမှ အရည်ရွှဲနေသော စောက်ပတ်အုံလေးမှာ ဖေါင်းကားထွက်လာပြန်သည်။ပြည့်စုံအောင် ငေးကြည့်နေစဉ် မယားဖြစ်သူ စောက်ပတ်လေးထဲ ဦးနိုင်လီးကြီး ဝင်သွားကာ ခါးလေးကိုင်ရင်း တဒိုင်းဒိုင်း ဆွဲလိုးနေသည်ကို မြင်လိုက်ရတော့၏။
အားပါသော ဆောင့်ချက်များကြောင့် တဇွိဇွိ တဘွတ်ဘွတ်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်လီးထွက်သံများ ဆူညံလာသည်။ ဝတ်ရည်ဖူးမှာ ဦးနိုင် လိုးချက်များအား တောင့်ခံရင်း ဖင်ကြီး နောက်ပစ်ကာ ရသလောက် ကော့ပေးနေပြန်၏။ဦးနိုင်တစ်ယောက် ပြည့်စုံအောင်အား ကြည့်လိုက် ဝတ်ရည်ဖူး ဖင်အား ဆွဲလိုးလိုက်နှင့် အသက်ရှုသံများ မြန်လာတော့သည်။ခါးလေးအား ကိုင်ထားရာမှ နို့နှစ်လုံးအား စုံကိုင်ပြီး လီးအရင်းထိ ဆောင့်လိုးရာ မောသံ ရှိုက်သံ ညည်းသံများ ထွက်လာရင်း ဦးနိုင် လည်ပင်ကြောများ ထောင်ထွက်လာ၏။
” အားးးး … ထွက် ထွက် ထွက်တော့မယ် …… ဝတ်ရည် “
” ခဏထိန်းထားနော် … ဦးနိုင် … ဝတ်ရည် စောက်ပတ်လေးပေါ် လရည်ဖြန်းပေး “
ဝတ်ရည်ဖူးမှာ လေးဘက်ကုန်း ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် ဖင်ရမ်းကာ လီးအား စောက်ဖုတ်ထဲမှ ချွတ်ထုတ်ပစ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပင်လက်လှဲချကာ ပေါင်ဖြဲ ပေးလိုက်၏။
” ရှီးးးးး …… ကျွတ် …… ထွက် ထွက် …… ထွက်ပြီ ဝတ်ရည် …………… အားးး အားးးးးးး အားးးးးးးး “
အံကြိတ်သံနှင့်အတူ ဦးနိုင် လီးထိပ်မှ လရည်များ ဝတ်ရည်ဖူး စောက်ပတ်လေးပေါ် ဖွေးကနဲ့ အပျစ်လိုက် ကျလာတော့သည်။ဝတ်ရည်ဖူး မှာ လရည်များ ကုန်စင်သည်အထိ လီးထိပ်အား စိုက်ကြည့်နေ၏။လရည်အထွက် ရပ်သည်နှင့် လင်ဖြစ်သူ ပြည့်စုံအောင် ဘက် မျက်စ ပစ်ပြလိုက်သည်။ဦးနိုင်မှာ ခေါင်းညိတ်ပြရင်း ပြည့်စုံအောင် ပုခုံးမှ မကာ ဝတ်ရည်ဖူး ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာအပ်ပေးနေ၏။
” ဟင် …… ဒါ ဒါ …… ဘာ လုပ် တာလဲ “
” ဘာလုပ်တာလဲ …… ဆိုတော့ …… ခု ငါ့စောက်ပတ် ပေါ်က …… လရည်တွေ နင့်လျှာနဲ့ ယက်ပြီး မျိုချ …… ခ်ခ် ခ်ခ် “
” ဘာကွ … နင် နင် … အောက်တန်း ကျလာချည်လား ဟမ် “
” ဟား ဟားးး ဟားးး ဟားးးးး … စကားမများနဲ့ …… ငါ ခိုင်း တဲ့ အတိုင်း လုပ်စမ်း …… ကြာပါတယ် ဦးနိုင်ရာ … သူ့ ပါးစပ်နဲ့ ဝတ်ရည် စောက်ဖုတ် ကပ်ထားပေးလိုက် “
” ဟာ ဟာ … မလုပ်နဲ့ နော် … နင်တို့ … ငါ ငါ … မလုပ်နိုင်ဘူး “
” ငါ့ လရည်တွေက … မင်း မိန်းမ စောက်ပတ် လိုးထားတဲ့ … လရည်တွေပါကွာ … ယက်ပြီး မျိုချစမ်း … ဟားးး ဟားးးး “
ဦးနိုင်မှာ ပြည့်စုံအောင်ခေါင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ဝတ်ရည်ဖူး စောက်ပတ်အုံနှင့် ပါးစပ်တေ့ကာ ဖိချလိုက်တော့သည်။
” ဟာ … မလုပ်နဲ့ …… ငါ မယက်ဖူး … ဝှီးးးးး ဒုန်းးးး … အွတ် … အမလေး “
ပြည့်စုံအောင် တယောက် အိပ်မက် မက်ရင်း ကုတင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျ လာတော့၏။တကိုယ်လုံး ချွေးများ ရွှဲနှစ်နေရာ ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှ ရေတဗူး ဖေါက်သောက်ရင်း ခဏ အမောဖြေနေလိုက်သည်။အိပ်ခန်းတံခါး ဖွင့်ကာ မယားဖြစ်သူ အိပ်ခန်းဘက် ခြေဖွဖွ လျှောက်ရင်း တံခါးသော့ပေါက်လေးမှ ချောင်းကြည့်ရာ ကလေးနှင့်အတူ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေသော ဝတ်ရည်ဖူးအား မြင်လိုက်မှ သက်ပြင်းရှည် ချလိုက်ရသည်။
အိပ်ခန်းထဲ ပြန်လာရင်း ကုတင်ပေါ် ကြိုးစား ပြန်အိပ်လိုက်ရ၏။အိပ်မောကျသွားရင်း အိပ်ခန်းထဲ အလင်းရောင် စူးစူး ကျရောက်လာသဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရာ မနက်ခင်း အလင်းရောင်နှင့် အတူ ကျေးငှက်လေးများ အော်မြည်သံပါ ကြားလိုက်ရပြန်သည်။အိပ်ယာ ထရင်း ရေချိုး အဝတ်စားများ လဲပြီး မနက်စာ စားရန် ဧည့်ခန်းဖက် ထွက်လာခဲ့၏။အဆင်သင့် ပြင်ထားသော မုန့်စားပြီး ကော်ဖီ သောက်နေစဉ် နောင်ကျော်ဘက်မှ စကားသံ ပေါ်ထွက်လာသည်။
” ဟော … နှစ်ယောက်သား ရေချိုး အဝတ်လဲထားကြတာ … ပြန် အဆင်ပြေသွားပြီ ထင်တယ် “
” ဗျာ …… ဟုတ် ဟုတ် … အန်တီမိုး “
ယောက္ခမ ဖြစ်သူ စကားကြားမှ ဒီနေ့ မယားဖြစ်သူ ဝတ်ရည်ဖူးအား ကျွန်အဖြစ် ဆက်ဆံပေးရမည့် ရက်မှန်း သတိရလိုက်မိ၏။ခဏ အကြာ ဝတ်ရည်ဖူး ထွက်လာရာ လက်တကိုင်း အင်္ကျီ အစိမ်းလေးဖြင့် အောက်က ထမ်ိန်စကပ်လေး ဖြစ်နေရာ အိပ်မက်ထဲက လို အဝတ်စားမဟုတ်သဖြင့် စိတ်အေးသွားရပြန်သည်။ဝတ်ရည်ဖူး မနက်စာ စားပြီးသည်နှင့် လင်မယားနှစ်ယောက် ခြံထဲမှ ကားလေးဖြင့် ထွက်လာရာ ပြည့်စုံအောင် တစ်ယောက် ဝတ်ရည်ဖူး ပြောပြသော လိပ်စာ အတိုင်းသွားရန် အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် မှေးတင်လိုက်တော့သည်။
မနက် အစောပိုင်း လူသွားလူလာ ရှင်းနေသဖြင့် မြို့စွန်ဘက် ထွက်ရန် မီးပွိုင်စုံသို့ ခဏလေးဖြင့် ရောက်ရှိလာ၏။မီးနီ နေသဖြင့် ခဏစောင့်ကာ မီးစိမ်းပြမှ လမ်းမကြီး အတိုင်း မောင်းလာခဲ့လိုက်သည်။လေးတဟူးဟူးဖြင့် လမ်းဘေးဝဲယာ သစ်ပင်ကြီးများ တရိပ်ရိပ် ကျန်နေရစ်၏။ပုံမှန်လေး မောင်းနေရာ ဝတ်ရည်ဖူး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ဖုန်သံမြည်လာတော့သည်။
” တူတူ … တူ …… “
ဝတ်ရည်ဖူးတစ်ယောက် နဖူးပေါ်ဝဲကျလာသော ဆံနွယ်များအား ဘေးသို့ ခေါင်းတချက် ရမ်းတင်ကာ ဖုန်းဖွင့်လိုက်၏။
” ဟဲလို …… ဝတ်ရည်လား “
” ဟုတ် … ဦးနိုင် … အိမ်က ထွက်လာပါပြီရှင် … ခ်ခ် ခ်ခ် “
” ဘာာာ ……… က်ြိ …… က်ြီ က်ြီ ………… က်ြိ “
ပြည့်စုံအောင် တယောက် မယားဖြစ်သူ ပါးစပ်မှ ဦးနိုင်ဆိုသည့် အသံကြားသည်နှင့် ညက အိပ်မက်အား သတိရကာ တကိုယ်လုံး တုန်လာရင်း ကားလေးအား လမ်းဘေး ထိုးဆင်းကာ ဘရိတ်အုပ်လိုက်တော့သည်။